चमकिन्दै मोबाइल बजार – Hotpati Media
११ आश्विन २०७७, आईतवार ०६:१९ मा प्रकाशित (1 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं-कोरोना महामारीका कारण अन्य व्यवसाय धराशयी बन्दै गएको पनि मोबाइलको बजार भने चम्किएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा भन्दा मोबाइलको आयात निकै बढेको छ ।
मोबाइलको माग बढेका कारण सबैभन्दा बढी आयात हुने डिजेल/पेट्रोललाई उछिन्दै मोबाइलको आयात पहिलो नम्बरमा उक्लिएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा रू. ७ अर्ब ९४ करोडको मोबाइल आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा रू. २ अर्ब ८४ करोडले बढी हो । यस अवधिमा अन्य बेला सबैभन्दा बढी आयात हुने डिजेल/पेट्रोलको आयात भने रू. ५ अर्ब ५ करोड मात्रै रहेको छ ।
चोरबाटो हुँदै आउने मोबाइल फोनको हिसाब गर्दा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि करीब यही बराबरको मोबाइल आयात हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले २०७५/७६ को बजेटबाट कर ७ प्रतिशतबाट बढाएर १६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि चोरबाटो हुँदै भित्रिने मोबाइल फोनको संख्या बढेको थियो,’ उनले भने ।
चोर बाटोबाट मोबाइल भित्रिन रोकिए चालू आर्थिक वर्षमा ३० अर्बभन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात हुने उनी बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा रू. १८ अर्बको मोबाइल फोन आयात भएको थियो ।
विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको शुरूदेखि सुधारिँदै आएको वैदेशिक व्यापार घाटा यस वर्षको पहिलो २ महीनामा पनि १७ प्रतिशतले सुधार आएको छ ।
आयातमा आएको गिरावटका कारण निर्यात सामान्य बढे पनि वैदेशिक व्यापारघाटामा सुधार आएको देखिएको हो । चालू आवको पहिलो २ महीनामा नेपालले रू. १ खर्ब ७८ अर्बको सामान आयात गरेको छ, जुन गतवर्षको भन्दा २२ प्रतिशतले कम हो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियानले छापेको छ।